Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Asturnaantaada ayaa muhiim noo ah. Waa siyaasadaha Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Waxbarashada Nabadda in la ixtiraamo macluumaadkaaga gaarka ah ee ku saabsan wixii macluumaad ah ee aan ka soo ururin karno ee ku saabsan boggayaga internetka, www.peace-ed-campaign.org.
Taariikhda waxtarka leh: Waxaa laga yaabaa 25, 2018
Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Waxbarashada ("annaga", "annaga", ama "kuweenna") wuxuu ka shaqeeyaa websaydhka nabadda-ed-campaign.org ("Adeegga").
Boggan wuxuu kugula socodsiinayaa siyaasadahayaga ku saabsan ururinta, isticmaalka, iyo bixinta macluumaadka shakhsi ahaaneed marka aad adeegsanayso adeegeena iyo xulashooyinka aad la xiriirto macluumaadkaas.
Waxaan u isticmaalnaa xogtaada si aan u bixinno una horumarinno Adeegga. Adoo adeegsanaya Adeegga, waxaad ogolaatay ururinta iyo adeegsiga macluumaadka si waafaqsan qaanuunkaan. Haddii aan si kale loogu qeexin Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, ereyada loo adeegsado Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxay leeyihiin macnayaal la mid ah Shuruudaha iyo Xaaladaheena, oo laga heli karo pcdnetwork.org
Adeeggu waa websaydhka nabada-ed-campaign.org ee ay maamusho Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Macluumaadka Shakhsiyeed waxaa loola jeedaa xog ku saabsan qof nool oo laga yaabo in lagu aqoonsado xogtaas (ama kuwa kale iyo macluumaadka kale midkeennu haysashada ama laga yaabo inay soo galaan hantideena).
Isticmaalka Macluumaadka waa xog ururin si toos ah oo ay soo saaraan isticmaalka Adeegga ama kaabayaasha Adeegyada laftiisa (tusaale ahaan, muddada booqashada bogga).
Kukiyada ayaa ah qaybo yar oo xog ah oo lagu kaydiyey qalabkaaga (kombuyuutar ama qalab mobile).
Xoghayayaasha Macluumaadka (ama Bixiyeyaasha Adeegga)
Xaqiijiyaha xogta (ama Bixiyaha Adeegga) macnaheedu waa qof kasta oo dabiici ah ama kan sharciga ah ee wax ka qabta xogta isaga oo ka wakiil ah Xakamaynta Xogta.
Waxaan adeegsan karnaa adeegyo badan oo Adeeg Bixiyeyaal ah si loo hirgeliyo xogtaada si wax-ku-ool ah.
Mawduuca Macluumaadka (ama Isticmaale)
Mawduuca Xogta waa qof kasta oo nool oo adeegsanaya adeegeena, waana mawduuca macluumaadka shakhsi ahaaneed.
Waxaanu ururinaynaa dhawr nooc oo macluumaad ah oo kala duwan ujeedooyin kala duwan si ay u bixiyaan una hagaajiyaan Adeeggeena.
Xogta Adeegsiga ee Soo booqdeyaasha Goobta ah
Markay booqdayaashu uga tagaan faallooyinka goobta waxaan soo aruurineynaa xogta lagu muujiyey foomka faallooyinka, iyo sidoo kale cinwaanka IP-ga soo booqdaha iyo silsiladda wakiilka isticmaale biraawsarka si looga caawiyo ogaanshaha spam. Isticmaalayaasha sidoo kale waxay dooran karaan inay soo qoraan faallooyin iyagoo adeegsanaya akoonadooda warbaahinta bulshada. Fadlan la tasho barnaamijkaaga warbaahinta bulshada ee ku saabsan siyaasaddooda asturnaanta.
Loogu talagalay Macaamiisha Wargeysyada
Haddii aad qortay mid ka mid ah joornaaladayada ama haddii aad xubin ka tahay degelkeenna (waad geli kartaa) waxaa jirta fursad wanaagsan oo aad emaillo nooga heli doontid.
Waxaan kuu soo diri doonaa oo keliya emayllo aad saxeexday inaad hesho, ama ku saabsan adeegyada aan ku siinay.
Si aan kuugu soo dirno emayllada, waxaan isticmaalnaa magaca iyo cinwaanka iimaylka aad na siiso. Boggeena sidoo kale wuxuu qorayaa cinwaanka IP-ga ee aad isticmaaleysay markii aad iska diiwaangelisay adeegga si looga hortago ku-xadgudubka nidaamka.
Websaydhkani wuxuu ku soo diri karaa emayl ahaan adeegga dirista grid. Adeegani wuxuu noo oggolaanayaa inaan la soconno furitaanka iyo dhagsiinta emaylladayada. Waxaan u isticmaalnaa macluumaadkan si aan u hagaajino waxa ku jira joornaaladayada. Fadlan la tasho U dir Grid siyaasaddiisa asturnaanta: https://sendgrid.com/policies/privacy/
Ma jiro macluumaad la aqoonsan karo oo si kale loola socdo oo ka baxsan websaydhkan marka laga reebo cinwaanka emaylka.
Dalka ay ku taal
Waad bixi kartaa inaad ka hesho wax uun, ama dhammaanba, wada-xiriirradan annaga oo wakhti kasta raacayna isku-xidhka ka-noqoshada ama tilmaamaha lagu bixiyay emayl kasta oo aan dirno ama nala soo xiriir annaga [emailka waa la ilaaliyay]
Badbaadada Kukiyada Waxaan u isticmaali karnaa Kukiyada Nabadgelyada sababo ammaan dartood.
Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda wuxuu u adeegsadaa xogta la ururiyey ujeeddooyin kala duwan:
Inay bixiyaan oo ay sii wadaan adeegyadayada
Si loo bixiyo taageerada isticmaalaha
Si loo ururiyo falanqeyn ama macluumaad qiimo leh si aan u hagaajino Adeeggeena
Si aan kuu siino wararka, ilaha iyo macluumaadka munaasabada (markaad ogolaanaysid inaad isqorto joornaal) illaa aad dooratid inaadan helin macluumaadkaas. Waad ka bixi kartaa inaad ka hesho wax uun, ama dhammaan, isgaarsiintan annaga markasta adoo raacaya cinwaanka ka-saarista ama tilmaamaha lagu bixiyay emayl kasta oo aan dirno ama annaga oo nala soo xiriiraya [emailka waa la ilaaliyay]
Aasaaska Sharciga ee Ku Shaqeynta Xogta Shakhsiyeed Sida Ku xusan Xeerka Ilaalinta Xogta Guud (GDPR)
Haddii aad ka timid Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA), PCDNetwork, LLC oo aasaas sharci ah u ah ururinta iyo adeegsiga macluumaadka shaqsiyeed ee lagu sharraxay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxay kuxirantahay Xogta Shakhsiyeed ee aan ururinno iyo macnaha guud ee aan ku aruurinayno.
Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Waxbarashada ayaa laga yaabaa inuu ka baaraandego Macluumaadkaaga Shakhsiyeed maxaa yeelay:
Waxaan u baahannahay inaan qandaraas kula sameyno
Waxaad na siisay ogolaansho sidaad sidaas u samayn lahayd
Hawlgalku wuxuu ku jiraa danahayaga sharciga ah mana dhaafinayso xuquuqdaada
Ujeeddooyinka loo marayo lacag bixinta
Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Waxbarashada ayaa hayn doonta Macluumaadkaaga Shakhsiyeed illaa inta ay lagama maarmaanka u tahay ujeedooyinka lagu qeexay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Waan hayn doonnaa oo adeegsan doonnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed illaa inta lagama maarmaanka u ah u hoggaansamida waajibaadkayaga sharciga ah (tusaale ahaan, haddii nalooga baahan yahay inaan xafidno xogtaada si aan ugu hoggaansano sharciyada khuseeya), xallino khilaafaadka, una dhaqan galino heshiisyadayada iyo siyaasadahayaga sharciga ah.
Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda ayaa sidoo kale hayn doona Xogta Isticmaalka ee ujeeddooyinka gorfaynta gudaha. Xogta Isticmaalka guud ahaan waa la hayaa muddo gaaban, marka laga reebo marka xogtan loo adeegsado in lagu xoojiyo amniga ama lagu hagaajiyo howlaha Adeeggeena, ama aan sharci ahaan waajib ku nahay inaan sii hayno xogtan muddo dheer.
Haddii aad ku sugan tahay meel ka baxsan Mareykanka oo aad dooratid inaad na siiso macluumaad, fadlan ogow in aan macluumaadka ku wareejinno, oo ay ka mid yihiin Xogta Shakhsiyeed, Mareykanka iyo in ay halkaas ka shaqeyso.
Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Waxbarashada wuxuu qaadi doonaa dhammaan tallaabooyinka si macquul ah lagama maarmaan u ah si loo hubiyo in macluumaadkaaga loola dhaqmo si ammaan ah oo waafaqsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah oo aan lagu wareejin doonin Xogtaada Shakhsiyeed meelna uga dhici doonin urur ama waddan haddii aysan jirin kontaroolo ku filan oo meesha yaalla ay ka mid yihiin amniga xogtaada iyo macluumaadkaaga kale ee shaqsiyeed.
Siidaynta Fulinta Sharciga
Xaaladaha qaarkood awgood, Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Nabadda waxaa laga yaabaa in loo baahdo inuu shaaca ka qaado Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed haddii loo baahdo in sidaas lagu sameeyo sharci ahaan ama looga jawaabayo codsiyo ansax ah oo ka yimaada mas'uuliyiinta dowladda (tusaale maxkamad ama hay'ad dawladeed)
Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Waxbarashada ayaa laga yaabaa inuu shaaca uga qaado Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed ee caqiidada wanaagsan ee aaminka ah in tallaabadaas ay lagama maarmaan u tahay:
Si loo ilaaliyo loona difaaco xuquuqda ama hantida Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada
Xuquuqdaada Ilaalinta Macluumaadka ee Xeerka Guud ee Ilaalinta Xogta (GDPR)
Haddii aad degan tahay Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA), waxaad leedahay xuquuqaha ilaalinta xogta qaarkood Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Waxbarashada ayaa looga golleeyahay in lagu qaado tallaabooyin macquul ah si laguu oggolaado inaad saxdo, wax ka beddesho, tirtirto, ama xaddiddo isticmaalka Xogtaada Shakhsiyeed .
Haddii aad rabto inaad la socodsiiso macluumaadka shakhsiyeed ee aan kaa hayno adiga iyo haddii aad rabto in lagaa saaro nidaamyadeena, fadlan nagala soo xiriir [emailka waa la ilaaliyay]
Xaalladaha qaarkood, waxaad leedahay xuquuqda ilaalinta xogta soo socota:
Xuquuqda aad u leedahay helitaanka, cusboonaysiinta ama tirtirka macluumaadka aan adiga kugu hayno. Markasta oo ay suurtogal noqoto, waad marin ka heli kartaa, cusboonaysiin kartaa ama codsan kartaa in la tirtiro Macluumaadkaaga Shakhsiyeed iyada oo loo marayo xiriiriyeyaasha lagu siiyay joornaaladaada ku qoran. Haddii aadan awoodin inaad sameyso ficilladan naftaada, fadlan nala soo xiriir si aan kaaga caawino
Xaqqa saxda ah. Waxaad xaq u leedahay in macluumaadkaaga la saxo haddii macluumaadkaas aan sax ahayn ama aan dhameystirneyn.
Xaqa aad u leedahay inaad diido. Waxaad xaq u leedahay in aad diidid ficilkeenna shaqsiyeedkaaga.
Xaqa xadaynta. Waxaad xaq u leedahay inaad codsato inaanu xakameyno habka macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed.
Xaq u lahaanshaha macluumaadka wax-qabadka. Waxaad xaq u leedahay in lagu siiyo nuqulka macluumaadka aan kuugu hayno habka muraayada, mashiinka loo akhriyo oo loo isticmaalo.
Xaqqa inaad ka noqoto ogolaanshaha. Waxa kale oo aad xaq u leedahay inaad ka noqoto ogolaanshahaaga wakhti kasta oo PCDNetwork, LLC ay ku tiirsanayd ogolaanshahaaga si ay uga shaqeyso macluumaadkaaga shaqsiyeed.
Fadlan ogow in aan ku weydiin karno inaad xaqiijiso aqoonsigaaga ka hor inta aanad ka jawaabin codsiyadaas.
Waxaad xaq u leedahay inaad ka cabato Hay'adda Ilaalinta Macluumaadka ee ku saabsan ururintayada iyo isticmaalka macluumaadkaaga shakhsiyeed. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir haya'dda ilaalinta macluumaadka deegaanka ee Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA).
Google Analytics waa adeeg falanqeyn websaydh ah oo ay bixiso Google kaas oo raadraaca oo ka warbixiya taraafikada degellada. Google waxay u isticmaashaa xogta la soo ururiyay si ay ula socoto una kormeerto isticmaalka Adeeggeena. Xogtaan waxaa lala wadaagayaa adeegyada kale ee Google.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan dhaqanka asturnaanta Google, fadlan booqo Xeerarka Asturnaanta Google bogga: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Waxaan si ammaan ah uga soo aruurineynaa deeqaha degelkeenna adoo adeegsanaya adeegyo dhinac saddexaad ah oo loogu talagalay ka shaqeynta lacag-bixinta (tusaale ahaan kuwa lacag-bixinta).
Siyaasadeeda Khaaska ah waxaa lagu arki karaa https://go.wepay.com/privacy-policy
Ma ogaanno in macluumaadka shakhsi ahaan loo aqoonsan karo qof ka yar da'da 18. Haddii aad tahay waalid ama ilaaliye oo aad ka warqabto in Caruurtaada ay na siiyeen macluumaadka shakhsiyeed, fadlan nala soo xiriir. Haddii aan ogaanno in aan soo uruurinnay macluumaadka shakhsiyeed ee carruurta aan ansixin ogalaanshaha waalidka, waxaan qaadnaa tallaabooyin aan kaga saarno macluumaadkaas ka yimid server-yadayada.
Adoo booqanaya boggan boggayaga: https://www.peace-ed-campaign.org/contact/